कोलेस्टेरोल, मुटु रोग देखि छाला, कपाल, हड्डी र दाँत स्वस्थ राख्न अण्डाकाे भूमिका ! • Nepal's Trusted Digital Newspaperकोलेस्टेरोल, मुटु रोग देखि छाला, कपाल, हड्डी र दाँत स्वस्थ राख्न अण्डाकाे भूमिका ! • Nepal's Trusted Digital Newspaper
कोलेस्टेरोल, मुटु रोग देखि छाला, कपाल, हड्डी र दाँत स्वस्थ राख्न अण्डाकाे भूमिका !
सेतो भागमा सेलेनियम, भिटामिन डी, भिटामिन बी ६, भिटामिन बी १२, जिंक, आइरन र कपरजस्ता खनिज पदार्थ पनि पाइन्छन् । पहेलों भागमा भने बढी क्यालोरी र चिल्लो पदार्थ पाइन्छ । तिनमा कोलेस्टेरोल, चिल्लोको मात्रा भएको भिटामिन ए, डी, इ र के तथा लेसिथिन पाइन्छ । आजकाल केही खालका अण्डामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । एउटा मध्यमखालको अण्डामा ७६ क्यालोरी, ७।५ ग्राम प्रोटिन, ५।१ ग्राम फ्याट र १।४ ग्राम स्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ।